Dagaal Culus oo ka dhacay Gaalkacyo - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News Dagaal Culus oo ka dhacay Gaalkacyo
Dagaal Culus oo ka dhacay Gaalkacyo
Maleeshiyaad hubeysan oo ka kala tirsan Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa iska hor imaad waxa uu barkhanimadii maanta ku dhexmaray Suuqa magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Dagaalkooda wuxuu salka ku hayaa arrimo horey u soo jiitamayay oo ah in ay isku qabsadaan dhul iyo aanooyin qabiil darteed ay ku diriraan, sida ay inoo sheegeen qaar ka tirsan dadka degaanka.
Labadan dhinac ayaa waxaa dhexmaray dagaal kooban oo qaatay Daqiiqado badan, waxaana iska hor imaadkooda ka dhashay khasaare kala duwan oo kala ah dhimasho iyo dhaawac.
Gaadiidka deg dega ah ee Ambalaasta gaar ahaan saraakiisha Caafimaadka oo tagay goobta dagaalka ayaa waxa ay Warbaahinta u xaqiijiyeen in halkaasi ay ka soo qaadeen Meydka Hal ruux iyo mid kale oo dhaawac ah.
Ciidamo hubeysan oo ka tirsan Dowladda Federaalka gaar ahaan kuwo dhowaan Taliyaha Ciidanka xoogga dalka Gen. Gorod uu u xilsaaray in ay ka shaqeeyaan xasilinta Gaalkacyo ayaa gaaray goobta, waxayna halkaasi ka bilaabeen howlo amni xaqiijin ah.
Ganacstada magaalada Gaalkacyo iyo Waxgaradka labada dhinac ayaa bilaabay kulamo gaar gaar ah oo xididada loogu jarayo colaadan soo laa laabatay ee dhiigga uu ku daato iyo sidii heshiis dhaxalgal ah looga gaari lahaa.
Colaada Magaalada Gaaalkacyo ayaa u muuqata mid ay faraha ka taagteen Dowladda Federaalka, Maamulada Puntland iyo Galmudug iyo Beesha Caalamka, maadaama dhowr jeer ay sameeyeen heshiisyo, welina aanay ka soo naasa cadaanin wax nabad ah.
Previous articleXog Rasmi ah:-Maamulka Hawada Soomaaliya Ma Ogtahay in Wali Nairobi lagasii Maamulaayo”
Next articleAmisom oo Qarax Lala eegtay Iyo Qasaaro Culus oo ka dhashay!!